५० बर्ष पछि पुन: बेहुला बने प्रचण्ड, गरे पत्नि सितासँग दोस्रो पटक बिहे – Nepal Trending
५० बर्ष पछि पुन: बेहुला बने प्रचण्ड, गरे पत्नि सितासँग दोस्रो पटक बिहे
On २६ बैशाख २०७६, बिहीबार १९:२०
फोटो : बाह्रखरी
काठमाडौँ, २६ वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहांकी पत्नी सीता दाहालबीच पुनःविवाह सम्पन्न भएको छ । मागी विवाह भएको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उहांको परिवारले बाबुआमाबीच दोस्रो पटक विवाह गराइदिएको हो । कास्की ढिकुरपोखरीमा जन्मनु भएका अध्यक्ष प्रचण्डले छिमेकी गाउं हेङ्जाकी सीतांसग १५ वर्षको उमेरमा २०२६ सालमा मागी विवाह गर्नुभएको थियो ।
विवाह भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा आज अपरान्ह ५ खुमलटारस्थित एक घरमा पुनःविवाह कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । गतवर्ष एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको निधन भएपछि विव्ह्ल हुनुभएकी श्रीमतीको उपचारका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले हदैसम्मको प्रयास गर्नुभएको छ । आग्रहमा आज गरिएको पुनःविवाहले आमाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहांको परिवारले विश्वास गरेको छ ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेतपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, दीनानाथ शर्मा लगायतका नेता कार्यकर्ता र नातेदारहरुको सहभागिता रहेको थियो । विवाह समारोहमा महिलाहरुले पञ्चैबाजा बजाएका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डका चार छोराछोरीमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । माइली छोरी रेनु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ भने कान्छी छोरी गंगा दाहालले निजी सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । दाहालले झण्डै १३ वर्ष भूमिगत जीवन बिताउँदा प्रचण्ड पत्नी सिता पनि सँगै हुनुहुन्थो। दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सुरू भएको शान्ति प्रक्रियापछि खुला राजनीतिमा आउनुभएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बन्नुभएको थियो । त्यसको झन्डै नौ वर्षपछि दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बन्नुभएको थियो । यतिवेला एमाओवादी र नेकपा एमालेबीच एकता पछि बनेको नेकपामा प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पत्नी सीता बिरामी भएपछि उहाँलाई पछिल्लो समय अमेरिकामा उपचार गराइएको थियो। सीता पार्किन्सन्स रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय सीताको शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। यस पुनः विवाहले सिता दाहालको स्वास्थ्य अबस्था सुध्रने र मानसिक रुपले सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रचण्ड र सीताबीच २०२६ साल वैशाख २६ गते विवाह भएको हो । पुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएपछि पुत्र शोकले सीता दाहालको स्वास्थ्य स्थिति बारम्बार बिग्रँदै आईरहेको छ ।
पत्नी सीता बिरामी भएपछि उहाँलाई पछिल्लो समय अमेरिकामा उपचार गराइएको थियो। सीता पार्किन्सन्स रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सीताको शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। यस पुनः विवाहले सिता दाहालको स्वास्थ्य अबस्था सुध्रने र मानसिक रुपले सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रचण्ड र सीताबीच २०२६ साल वैशाख २६ गते विवाह भएको हो । पुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएपछि पुत्र शोकले सीता दाहालको स्वास्थ्य स्थिति बारम्बार बिग्रँदै आईरहेको छ ।
माेदी र ओलीद्वारा पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन ! पाइपलाइन सञ्‍चालनसँगै डिजेल/पेट्रोलको…
२२ बर्ष नपुगेकाले रक्सी खान नपाउने, जँड्याहाको लिस्ट निकाल्ने ( भिडियो हेर्नुस )
अन्तत : चर्को आलोचना भएपछि सरकारद्वारा गुठी विधेयक फिर्ता
प्रचण्डको ‘हत्या योजना’ बारे पहिलोपटक बोले विप्लव….
पत्रकारले सोधेको प्रश्नको सामना गर्न नसकेपछि माइक फाल्दै यसरी भागे उपेन्द्र यादव (…
बाबुरामको पार्टीलाई ठूलो झड्का, केन्द्रीय सदस्यसहित ४० कार्यकर्ता नेकपा प्रवेश